कुखुराको मासु अहिलेसम्मकै महँगो, किन? :: सुनिता सिटौला :: Setopati
कुखुराको मासु अहिलेसम्मकै महँगो, किन?
पछिल्लो समय कुखुरा मासुको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। बजारमा कुखुरा अभावका कारण मूल्य बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
देशमा बर्डफ्लु देखिएको र कुखुरा नष्ट गरिएकाले अभाव भएको उनीहरूको भनाइ छ। एकातिर कुखुरा अभाव, अर्कातिर मासुको माग बढेपछि मूल्य बढ्दै गएको भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक हरिकृष्ण रावलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विगत २–३ दिनदेखि बजारमा कुखुराको मासु प्रतिकिलो चार सय १३ रूपैयाँ पुगेको छ। कुखुरा मासु यति धेरै महँगो पहिलो पटक भएको उनको भनाइ छ।
'कुखुराको मासुको भाउ अहिलेसम्म यति पुगेको थिएन, यति महँगो भएको पहिलो पटक हो,' उनले भने।
व्यवसायीहरूले भनेझैं बर्डफ्लुकै कारण कुखुरा महँगिएको हो त? बर्डफ्लुले कति कुखुरा मरे? हामीले यसबारे पशुसेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालसँग सोध्यौं।
ढकालले भने मासुको भाउ यति धेरै बढ्ने गरी बर्डफ्लु व्यापक नफैलिएको बताए। उनका अनुसार हालसम्म काठमाडौंको तारकेश्वर, ललितपुर, जाजरकोट र सुर्खेतमा मात्र बर्डफ्लु देखिएको छ।
पशुसेवा विभागले दिएको तथ्यांकअनुसार गत माघ १७ गते तारकेश्वरको वडा नं ७ फटुङका स्थानीयले पालेका १ हजार ८ सय ६५ हाँस, ६ सय २२ बट्टाई, ३२ कुखुरा, २५ टर्की, ५ सय ४२ अण्डा र ७५ केजी दाना नष्ट गरेको थियो।
त्यस्तै माघ २९ गते तारकेश्वर वडा १ का स्थानीयले पालेका १ हजार ४ सय २१ हाँस, ४२ स्थानीय कुखुरा, २६ अण्डा र ८ सय केजी दाना नष्ट गरियो। फागुन ६ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ का किसानले पालेको स्थानीय कुखुरामा बर्डफ्लु देखिएको थियो। त्यहाँ २७९ कुखुरा, १०२ परेवा, २२ अण्डा, ३१ केजी दाना नष्ट गरिएको विभागको तथ्यांक छ।
फागुन १३ गते फेरि तारकेश्वर वडा १ का स्थानीयले पालेका ५ हजार ६ सय ५७ लेयर्स कुखुरा, ७ हजार २ सय ३६ बोइलर कुखुरा र २ हजार ५ सय ४ लोकल कुखुरा, ५० टर्की, बट्टाई ३ हजार ५ सय ७० अण्डा र ३ हजार केजी दाना नष्ट गरियो। फागुन २५ मा जाजरकोटमा बोइलर ३ सय, लेयर्स ३३१, लोकल ७०, अण्डा ८८३, दाना २५१ नष्ट गरिएको थियो।
चैत १३ गते ललितपुरको नख्खुमा ५१६ हाँस, ८५४ स्थानीय कुखुरा, १५४ बट्टाई, ९४४ गोटा अण्डा र ३३५ केजी दाना नष्ट गरिएको थियो।
यसपछि भने बर्डफ्लु संक्रमण नदेखिएको विभागको भनाइ छ।
माथिको तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने देशैभरि बर्डफ्लुका कारण १७ हजार ३५ वटा कुखुरा नष्ट भएको छ। त्यसमा पनि धेरै संख्यामा स्थानीयले पालेका कुखरा नष्ट भएका हुन्। बोइलर कुखुरा संख्या कम देखिन्छ।
कुखुरा उत्पादक संघका अध्यक्ष झनक पौडेल बर्डफ्लुका बहानामा मासुको मूल्य बढाउन नहुने बताउँछन्।
'बर्डफ्लुले अत्यधिक कुखुरा नष्ट भएको छैन। यसको बहानामा मूल्य बढाउनु उचित छैन,' उनले भने।
गत चैतमा भएको लकडाउनपछि कुखुरा उत्पादन भने घटेको उनले बताए। उनका अनुसार चैतदेखि भदौसम्म ६० प्रतिशत कुखुरा उत्पादन भएको थियो। त्यसपछि ८० प्रतिशत कुखरा उत्पादन हुन थालिसके पनि पछिल्लो समय दाना र चल्लाको भाउ बढेकाले ७० देखि ७५ प्रतिशतमा झरेको उनले बताए।
'अहिले दानाको मूल्य एकदमै महँगो भएको छ। भटमास वा मकैमा एक रूपैयाँ बढ्यो भने पनि दानाको मूल्य बढाइहाल्छन्। दानामा भटमास र मकैको मात्रा कति छ थाहा छैन,' उनले भने, 'चल्लाको पनि अवस्था उस्तै छ। ह्याचरीले प्रतिचल्ला ८० रूपैयाँ तोकेको छ तर किसान एक सयदेखि एक सय दस रूपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्।'
सरकारले दाना र चल्लामा निर्धारण गरिएको मूल्य उचित हो वा होइन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन्।
'बर्डफ्लु बहाना मात्र हो। दाना र चल्लाको भाउ धेरै बढेको छ। सरकारले पहिला यसमा अनुगमन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'मासुको मूल्य वृद्धिबारे पनि तत्काल अनुगमन गर्नुपर्छ।'
सरकारले आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको वस्तु सहज र सुपथ मूल्यमा पाइनुपर्ने उनले बताए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ३१, २०७७, ०७:४३:००
मौसमको सूचना किसानसम्म नपुग्दा ...
‘कस्तो हुँदोरहेछ भनेर कुरिलो खेती गरेका थियौँ, आम्दानी त गज्जब भयो ’